यी हुन् ‘थोमस बैटी’ बच्चा ज’न्माउने पहिलो पुरुष, तीन पटक भए सु’त्केरी (भिडियोसहित) – Khabaarpati
March 9, 2021 goodmamLeaveaComment on यी हुन् ‘थोमस बैटी’ बच्चा ज’न्माउने पहिलो पुरुष, तीन पटक भए सु’त्केरी (भिडियोसहित)
विज्ञानले नयाँ नयाँ खोजको विकास गरेको छ । कसैको कल्पनामा पनि नभएका कुराहरु विज्ञानले सम्भव तु’ल्याइदिएको छ । सन्तान जन्माउने विषयमा पनि विज्ञानले यस्तै आश्चर्यजनक कुरा सफल सावित गरेको छ ।
अष्ट्रेलियाका एक पुरुषले तीन तीन पटक सुत्केरी भएर बच्चा जन्माएका छन् । बच्चालाई जन्म दिने व्यक्ति ट्रान्सजेन्डर पुरुष हुन्। विश्वको पहिलो गर्भवती यी पुरुषले तीन बच्चा जन्माइसकेका छन् ।
यस लिं ग परिवर्तनमा हर्मोन टेस्टोस्टेरोनको पनि प्रयोग गरिएको छ, जसमा एक महिलाको आवाज पुरुषको जस्तो ठूलो हुन्छ । यो टेस्टोस्टेरोन हर्मोनको मद्दतबाट प्रजनन तन्त्रमा पनि परिर्वतन गर्न सकिने वैज्ञानिकहरुले बताएका छन् ।
जस्तै अर्का ट्रान्सजेन्डर एनएचएसले पनि बच्चालाई जन्म दिने तयारी गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। महिलाको रुपमा जन्म भएर यौ’न अंग परिर्वतन गरेका कारण उनले पनि सजिलै बच्चा जन्माउन सक्ने चिकित्सकहरुको भनाइ छ ।
यौ’न अंग परिर्वतन गरेपछि पुरुष बनेपछि पनि बच्चा जन्माउन इच्छा गरेमा कुनै समस्या भोग्नु नपर्ने अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ । लिंग परिवर्तनपछि पनि बच्चाको चाहनाले धेरैले बच्चा जन्माउने लहर नै चल्न थालेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
भिडियो मा क्लिक गर्नुहोस !
बिर्सेर पनि खेर नफाल्नुहोस अण्डा उसिनेको पानी, यस्ता छन् अचम्मका फाइदाहरु !
December 6, 2020 Khabar Pati
October 16, 2020 October 16, 2020 Khabar Pati